प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावपछि शशांक कोइराला उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री बन्न राजी « Sagarmatha Daily News
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावपछि शशांक कोइराला उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री बन्न राजी
काठमाडौं, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संसदमा विश्वासको मत लिएको एक साता पुग्न लागेपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेका हुन् । यसको लागि उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि आज छलफल गरेका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवाले दाहालसँगै नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमारन नेपालसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
माओवादीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नामको सूचि देउवाकहाँ पुगिकेको छ । तर, नेपाल समूहले भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने जवाफ दिएको छ । नेपाल समूहकोको ग्रिन–सिग्नल कुरेका प्रधानमन्त्री देउवाले अब भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई नगर्ने बताउन थालेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नामसमेत छनौट गरिरहेका छन् ।
हिजोमात्रै उनले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग यसबारेमा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शशांकलाई नै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शशांकलाई उपप्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा शशांक सकारात्मक बनेको बुझिएको छ ।
पौडेल समूहबाट क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल भैरहेको बेलामा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा स्वयमले शशांकलाई सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी हुन गरेको प्रस्तावलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । पौडेल समूहबाट चार जनाले मन्त्री बन्न दाबी गरेका छन् । तर, देउवाले कृष्णप्रसाद सिटौलासहित ४ वटा मन्त्रालय दिने भनेका छन् ।
नेपाल भगवान भरोसामा चलेको छ : राजेन्द्र महतो
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल भगवान भरोसामा चलिरहेको बताएका छन् ।
हामीलाई निजगढ विमानस्थल चाहिन्छ : बाबुराम भट्टराई
काठमाण्डाै – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल दुर्घटनामा घाइते भएकी छन् । उनको सुमेरु अस्पतालमा
एमालेलाई मिनेन्द्रको सुझाव : आफ्नो जनमत कति छ, टर्च बालेर खोज्नू
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आफ्नो जनमत टर्च बालेर खोज्न
एमालेलाई मिनेन्द्रको सुझाव : आफ्नो जनमत कति छ, टर्च बालेर…